China API610 BB4 (RMD) စုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | damei kingmech စုပ်စက်
အရွယ်အစား: 4-10 လက်မ
စွမ်းရည် - ၁၀၀-၅၈၀ m3 / h
ဦး ခေါင်း: 740-2150m
အပူချိန်: 0-210 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
၁။ စုတ်ယူခြင်းအထည်၊ စွန့်ပစ်ထည်၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု - ခရိုမီလီယံကာဗွန်သံမဏိ
2. ရိုးတံ, လက်စွပ်ဝတ်ဆင်နှင့်ပျံ့ချုံ: chrome သံမဏိ၏ chromic alum သံမဏိ။
၁။ ပန့်များသည်အပိုင်းလိုက်ထည်၊ စင်မြင့်ပါသော centrifugal pump များဖြစ်သည်။ စုတ်ယူခြင်းအဖုံး, စင်ပေါ်အိတ်များနှင့်စွန့်ပစ်ထည်များသည်သော့ခလောက်များနှင့်အတူတကွတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ဤအထည်များအကြားအဆစ်များကိုအဓိကအားဖြင့်သတ္တု - သတ္တုအဆက်အသွယ်အားဖြင့်တံဆိပ်ခတ်နေကြသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်၊ အိုလက်စွပ်များကိုအရန်တံဆိပ်များအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
၂။ အတုပြုလုပ်ထားသောအပိုင်းအစများကို MSHB ဖိအားဘွိုင်လာ feed pumps များစုတ်ယူခြင်း၊ စင်မြင့်နှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
၁။ ဤပန့်များ၏ရိုးတံများကိုအပျော့ထည်နှင့်ရေအေးဖြင့်တံဆိပ်ခတ်သည်။ ရိုးတံတံဆိပ်ခတ်သည့်ဒေသတွင်စုပ်စက်ကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲလက်ဖြင့်ကာကွယ်သည်။
bearings နှင့် axial balancing device
2. အလှည့်စည်းဝေးပွဲကိုစုပ်စက်ရိုးတံ၏နှစ် ဦး စလုံးကြီးစွန်းပေါ်ဝက်ဝံလျှောကထောက်ခံသည်။ pump ၏ bearings အတင်း - ချောဆီ။ ရေနံစနစ်သည် DG pump အတွက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ချိန်ခွင်လျှာ disc ကိုအားဖြင့်မျှမျှတတ rotor osis ၏ axial တွန်းကန်အား။ နှင့်တွန်းကန်အား bearing ကိုအလုပ်လုပ်အခြေအနေများပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကျန်ရှိသော axial အင်အားကိုထမ်းဖို့ rsed သော laso ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
၁။ pump ကို coupling မှတဆင့် motor မှတိုက်ရိုက်မောင်းနှင်သည်။ ဂီယာ၊ အမြှေးပါးနားချင်းဆက်မှီနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆက်သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါစုပ်စက်ကိုမော်တာတာဘိုင်များကမောင်းနှင်နိုင်သည်။
မောင်းနှင်မှုအဆုံးမှကြည့်ရှုသည့်အခါ 2. ပန့်များ၏လည်ပတ် ဦး တည်ချက်လက်ယာရစ်ဖြစ်ကြသည်။
3. အမျိုးအစား MSH မြင့်မားသောဖိအားဘွိုင်လာအစာကျွေးသောပန့်များကိုမြင့်မားသောဖိအားမြင့်ဘွိုင်လာကိုသန့်ရှင်းသောရေတင်ပေးသည့်ဘွိုင်လာကိုကျွေးမွေးသည်။
ကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းရေ suppy အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်
ရှေ့သို့ API610 BB3 (AMD) Pump
နောက်တစ်ခု: API610 BB5 (DRM) Pump
API610 VS1 Pump VTD ပုံစံ
API610 OH1 Pump FMD ပုံစံ
API610 OH3 Pump GDS ပုံစံ